Deni: Waxa Somalia ka socda ma ahan wax laga aamusi karo, dalkan meel halis ayuu ku jiraa… – Hagaag.com
Deni: Waxa Somalia ka socda ma ahan wax laga aamusi karo, dalkan meel halis ayuu ku jiraa…
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay Xarunta PDRC ee Magaalada Garoowe, isagoo markaasi xaaladda dalka uga warbixinaya shacabka reer Puntland.
Deni ayaa Madaxweyne Farmaajo ku tilmaamay kali-talis, isagoona yiri “Waxa Somalia ka socda wax laga aamusi karo maaha, dalkan meel halis ah ayuu ku jiraa. Waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed, si mideysan iyagoo iskala saarin kali-talis inay ka horyimaadaan, iyagoo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan, iyagoo mideysan waxay heshiis ku yihiin oo ah inay doorashada galaan.”
Deni ayaa yiri “Hadda tii u dambeysay Walaahi inaaan been ka sheegayn wuxuu yiri Garowe hala yimaado, maya maya baan niri, lafahaynaa uga baqnayba. Wuxuu yiri Dhuusamareeb hala yimaado, waxaan ku dhahnay war Dhuusamareeb haddaan ka nimid oo xabadaa ka dhacayay, maya anaa og buu yiri waxba kama dhacayaan. Ma garanayo intuu ogyahay, macnaheeda waxay tahay kuwa wax soo tuurana waa yaqaanaan.”